Indawo yokuhlala e Kildare
Ukusuka kokunethezeka kwezinkanyezi ezi-5 kuya ekwamukelweni okufudumele kwasendaweni kwe-B & B noma ukuzimela kokuziphakela, iKildare inezinketho zokuhlala ezingavumelana nakho konke ukunambitheka nesabelomali.
Ngemuva kosuku olumatasa lokwambula izinganekwane nezinganekwane zezindawo ezingamagugu zikaKildare, noma ukujabula kosuku emijahweni, noma ukudansa ebusuku kude neseshini yomculo wesiko ongazethembi, uzodinga ukuphumula okuhle ebusuku. Ngakho-ke ufuna ukubeka kuphi ikhanda lakho, ulale kahle bese uqala usuku olulandelayo lokuzijabulisa kwakho eholidini lakho? Sinazo zonke izinhlobo zokuhlala eKildare ongakhetha kuzo!
Izinqaba Nezindlu Zomlando
Izindawo Zomshado Eziphezulu zase-County Kildare
Indawo Yokuhlala Engavamile: Chitha ubusuku esikebheni esiseKildare!
Indawo enhle yegalufu ebekwe esakhiweni sanamuhla, isithabathaba sendlu yekhulu le-19 kanye nezengezo zekotishi.
I-ambiance yokwamukela ye-Country House Hotel enenzuzo yokuba itholakale enhliziyweni yedolobha laseKildare.
Setha phakathi kwamahektare wezingadi zomlando nezithakazelisayo, ama-walkways & parkland, ngokubukwa okuhle kakhulu emaphandleni aseKildare.
Ihhotela lezinkanyezi ezine elinamachibi amahle nezindawo zokungcebeleka, kanye nemisebenzi yezingane nezinketho zokudlela ezinhle.
Kutholakala nje imizuzu engamashumi amabili nanhlanu ukusuka eDublin kumahektha ayi-1,100 epaki eliyimfihlo, iCarton House iyindawo yokubhuka kanokusho egxile emlandweni nobukhulu.